Obere nha abụọ na-emeghe Mill, Lab Rubber Open inggwakọta Mill, Lab Plastic Open inggwakọta Mill ọnọ na China
Nkọwa:Obere nha abuo mepere Mill,Lab Labber Mepee inggwakọta Mill,Plasticlọ nyocha Lab Open Mepee Mill,Lab Lab Roll Mepee Mill,,
Home > Ngwaahịa > Abụọ Roll Mill > Lab TEST Two Roll Mill
Ngwaahịa nke Lab TEST Two Roll Mill , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Obere nha abuo mepere Mill , Lab Labber Mepee inggwakọta Mill suppliers / factory, wholesale high-quality products of Plasticlọ nyocha Lab Open Mepee Mill R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
LN-RS-90 Mpempe akwụkwọ Rubber Extruder  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-agakọta Mill maka Ihe Ọhụrụ  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe abuo na - agwakọta Mill maka Ihe omuma ndi mmadu Silicone  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe igwe abuo maka mkpuchi nke waya  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-agakọta Mill maka akụkụ nke ụgbọ elu  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ Roll Mill na Inverter  Kpọtụrụ ugbu a
Nhicha Mfe abụọ  Kpọtụrụ ugbu a
Nchedo Elu abuo  Kpọtụrụ ugbu a
Ohere zuru oke ọsọ abụọ  Kpọtụrụ ugbu a
Elu igwe abuo gbara oso  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-atụgharị igwe abụọ nwere oke ziri ezi  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-atụgharị na arụ ọrụ kpo oku  Kpọtụrụ ugbu a
Ọmụmụ Ihe Ọmụma Abụọ Enyi na-enwu gburugburu ebe obibi  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ Roll Mill nwere ngwaọrụ na-agbazi ọsọ  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-atụgharị uche na njikwa ọgụgụ isi  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ Roll Mill na Ngwaọrụ PLC  Kpọtụrụ ugbu a
Nnukwu mpịakọta abụọ na precise Roll Distance  Kpọtụrụ ugbu a
Mill Roll Mill na Pneumatic igbochi Plate  Kpọtụrụ ugbu a
Anti Sticky Twl Roll Mill maka Rubber  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo abuo bu ogwu chrom na aru oru  Kpọtụrụ ugbu a
Abụọ na-atụgharị ike na oke ike  Kpọtụrụ ugbu a
LN-RS-90 Mpempe akwụkwọ Rubber Extruder
LINA 4 Inch Second Roll Mepee Ngwakọta Mill Nzube nke LINA Abụọ Roll Open Mill na -ebute ụzọ na ụlọ ọrụ igwe na roba China. Esemokwu dị elu na nchekwa dị elu bụ ebumnuche ndị bụ isi nke LINA's Rubber Milling Machine . Na mgbakwunye, onye ọrụ...
Abụọ na-agakọta Mill maka Ihe Ọhụrụ
LINA abuo mepere emepe maka ihe ohuru LINA akpaka igwe na - emepe emepe maka Ihe New A na-eji ya arụ ọrụ na plastik na ihe ọhụrụ. automaticdị akpaka ga-echekwa ọrụ ma belata ọnụ ahịa. A na - esite na Germany, Japan na Taiwan butere akụkụ bụ isi nke...
Ihe abuo na - agwakọta Mill maka Ihe omuma ndi mmadu Silicone
LINA Abụọ Roll Mepee Na-agwakọta Mill maka nri Grade Silicone A na-eji LINA Emepe Ngwakọta abụọ maka nri Grade Silicone na ọtụtụ ihe dị ka NBR, SBR, PP, EVA. Onye na-eme onwe ya ọcha nwere ike ichebe ọrụ. Abụọ Roll Mill bụ igwe kachasị dị ize ndụ na...
Mpempe igwe abuo maka mkpuchi nke waya
LINA Ngwunye Ngwakọta Nmegharị Ngwakọta abụọ maka mkpuchi mkpuchi waya A na-eji LINA Mepee Igwe Mepee Ngwakọta Ngwakọta maka Data Wire na ọtụtụ ụdị ihe dị ka NBR, SBR, PP, EVA. Onye na-eme onwe ya ọcha nwere ike ichebe ọrụ. Abụọ Roll Mill bụ igwe...
Abụọ na-agakọta Mill maka akụkụ nke ụgbọ elu
LINA mmadụ abụọ na-emeghe igwe mmadụ maka akụkụ akụkụ ụgbọ elu LINA akpaka igwe mmadụ abụọ na-emepe emepe maka oghere ụgbọelu na-arụ ọrụ nke ọma na plastik na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Newdị akpaka ga-echekwa ọrụ ma belata ọnụ ahịa. A na - esite na...
Abụọ Roll Mill na Inverter
LINA mmadụ abụọ mepere emepe maka roba roba na inverter A na-eji LINP mepee oghere igwe na inverter na-eji ọtụtụ na plastik na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ.The Inverter nwere ike ijikwa ọsọ ọsọ ma chebe moto. A na - esite na Germany, Japan na Taiwan butere...
Nhicha Mfe abụọ
LINA Mfe Mpempe Ntinye abuo na-acha uhie uhie maka rọba rọba LINA igwe na-emeghe oghere dị ọcha na-eji ya eme ihe n'ụzọ sara mbara na ngwaahịa ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Typesdị ihe dị iche iche dị mma ma nwee agba dị iche iche, ọ dịghị mma ma ọ bụrụ na...
Nchedo Elu abuo
LINA Elu nchekwa nchekwa igwe abụọ na-emeghe maka rọba roba LINA igwe na-emeghe oghere na nchekwa dị elu na -arụ ọrụ nke ọma na plastic na ụlọ ọrụ akụrụngwa.The nsogbu nchekwa na-eme ugboro ugboro mgbe ị na-arụ igwe na-agwakọta igwe na-emeghe . A na...
Ohere zuru oke ọsọ abụọ
LINA na-agbanwe agbanwe na-agbagọ agbagọ abụọ maka oghere rọba A na-eji LINL oghere abụọ na-emepe emepe na-agbatị agbatị agbatị na plastik na akụrụngwa ihe ọhụrụ. Ihe ụfọdụ chọrọ ngwa ngwa rotors na-agwakọta. A na - esite na Germany, Japan na Taiwan...
Elu igwe abuo gbara oso
LINA High Speed ​​abụọ Roll Mepere emepe maka rọba roba LINA igwe igwe ghere oghe eji okpukpu abuo di elu na otutu ihe eji eme ya. A na - esite na Germany, Japan na Taiwan butere akụkụ bụ isi nke LINA Rubber Open Mill . Nzube nke LINA Abụọ Roll Open...
Abụọ na-atụgharị igwe abụọ nwere oke ziri ezi
LINA mmadụ abụọ na-emepe emepe maka roba roba nwere oke nkpebi A na-eji LINL emepe emepe oghere abụọ nwere nnukwu elele na -arụ ọrụ nke ọma na plastik na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Typedị igwe na-emepe emepe ka eji eme ihe na ngalaba nyocha na mahadum. A na...
Abụọ na-atụgharị na arụ ọrụ kpo oku
LINA kpo oku igwe abuo mepe emepe nke roba A na-eji LINL emepe emepe na arụ ọrụ kpo oku na-arụ ọrụ nke ọma na plastik na ụlọ ọrụ akụrụngwa ọhụrụ.Ọnụ igwe na-ejikarị ụdị ụdị ikpo ọkụ abụọ na-achịkwa, a na-ejikwa ụdị kpo oku n'ozuzu na rọba. A na...
Ọmụmụ Ihe Ọmụma Abụọ Enyi na-enwu gburugburu ebe obibi
LINA Eperede Enyi na Ngwongwo abuo mepere emepe maka roba Lina gburugburu friendly abụọ mpịakọta oghe na nkume igwe nri na-agụnye-eji na roba, plastic na ihe ọhụrụ ndị ụlọ ọrụ. Omume nke nchedo ihe omimi na-ewelite elu uwa niile. A na - esite na...
Abụọ Roll Mill nwere ngwaọrụ na-agbazi ọsọ
LINA mmadụ abụọ na-emepe emepe maka rọba roba na ngwaọrụ na-agbazi ọsọ A na-eji LINL mepere emepe na-emegharị ngwa ngwa nwere ngwaọrụ eji arụ ọrụ roba, rọba na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Ngwaọrụ nwere ike ijikwa ọsọ ngwa ngwa cha cha, nke nwere ike ịchekwa...
Abụọ na-atụgharị uche na njikwa ọgụgụ isi
LINA mmadụ abụọ na-emepe emepe maka roba roba na njikwa ọgụgụ isi A na-eji LINL mepere emepeepe na igwe ọgụgụ isi na-ejikarị roba, rọba na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. A na-eji ngwaọrụ ahụ nwalee usoro esi nri, yabụ ejiri ya mee ihe na ngalaba nyocha. A na -...
Abụọ Roll Mill na Ngwaọrụ PLC
LINA mmadụ abụọ mepere emepe maka roba plastik na ngwaọrụ PLC LINA igwe igwe ghere oghe emeghe na ngwaọrụ PLC ka eji ya eme ihe n’iru roba, plastik na ulo oru ihe ohuru. Ngwaọrụ a na-enyere aka idekọ nsonaazụ nyocha, nke na-eme ka ọ bụrụ ndị ama ama...
Nnukwu mpịakọta abụọ na precise Roll Distance
LINA mmadụ abụọ na-emepe emepe maka roba roba na Distcise Roller Distance LINA igwe e ghere eghe oghe eji anya igwe eji ogologo roba, roba na ulo oru ihe ohuru. A na-ejikarị ya akụrụngwa ahụ chọrọ ịrụ ọrụ ọfụma. Akụkụ bụ isi nke LINA Rubber Open...
Mill Roll Mill na Pneumatic igbochi Plate
LINA mmadụ abụọ na-emepe emepe maka roba roba na pneumatic igbochi Plate LINA mpịakọta oghe pneumatic abụọ na-emechi emechi na roba, rọba na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Emebere ya maka nhicha dị mfe nke ihe siri ike obibi. Akụkụ ndị bụ isi nke LINA Rubber...
Anti Sticky Twl Roll Mill maka Rubber
LINA Anti Sticky Tw Roll Mill na-emepe emepe maka rọba roba Lina mgbochi nnyapade abụọ mpịakọta oghe na nkume igwe nri na-agụnye-eji na roba, plastic na ihe ọhụrụ ndị ụlọ ọrụ. Ọ dị maka ịwụnye ngwaọrụ ahaziri maka igbo mkpa a na - esite na Germany,...
Ngwongwo abuo bu ogwu chrom na aru oru
LINA abuo mepee emepe na emepe emepe A na-eji LINL emepe emepe oghere abụọ maka ọgwụgwọ chromium na roba, plastik na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ. Ndị ahịa nwere ike inye ihe achọrọ mgbe ahụ LINA ga-eme ya site na ịchọrọ. A na - esite na Germany, Japan na...
LINA abuo gbara oso meghee igwe siri ike LINA abuo meghere igwe nwere oghere siri ike na-ejikarị roba, plastik na ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ.LINA ga-emegharị nhazi ahụ dabere na ihe achọrọ. A na - esite na Germany, Japan na Taiwan butere akụkụ bụ isi nke...
China Lab TEST Two Roll Mill Ngwa
LINA Labo Labol Roll Mepere
Ọmarịcha ịrụ ọrụ igwe simenti LINA na- emepe emepe ka ọ dị mma maka roba, plastik, elastomer na ndị ọzọ na-arụ ọrụ, ọkachasị maka nnwale ụlọ nyocha iji hụ na ịtụle ihe dị iche iche nke anụ ahụ.
Lina oghe na nkume igwe nri dị na nchekwa bụ mbụ ná ndụ anyị, Lina si injinịa nnyocha ma mepụtara mbara nchekwa ngwaọrụ dị ka 360 degrees mberede nkwụsị button, laa azu braking ngwaọrụ, infrared mmetụta na ergonomics nche ngwaọrụ wdg Lina abụọ mpịakọta igwe 's nchekwa ngwaọrụ etinyere mba patent.
A na-esi na Taiwan ebubata ihe dị iche iche, ụdị ndị na-ebu mmegharị bụ LINA.
· Wedata mmebi si mberede
· Igwe nju oyi na-emechi emechi
· Mirror elu ọgwụgwọ nke rollers
LINA abuo mepere emepe
Obere nha abuo mepere Mill Lab Labber Mepee inggwakọta Mill Plasticlọ nyocha Lab Open Mepee Mill Lab Lab Roll Mepee Mill Obere nke mepere Mill